किन दिनदिनै टायर बालेर प्रदर्शन हुन्छ त्रिविमा? :: Setopati
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा हिजोआज टायर बालेर प्रदर्शन हुन्छ।
टायर बाल्नेहरू विद्यार्थी हुन्- उनीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसंघमा आवद्ध छन्।
त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त हुनुअगाडिदेखि नै नेविसंघ आन्दोलनमा थियो। उनीहरूको माग- त्रिवि पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुनु भएन भन्ने थियो।
त्यसबेला उनीहरूले त्रिविको मूल गेटदेखि त्रिवि परिसरमा भागबन्डाविरूद्ध ब्यानर नै टाँगेका थिए। यसबीचमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त भए। विभिन्न संकायका डिन, विभागीय प्रमुख, आंगिक क्याम्पस प्रमुख तोकिए।
नेविसंघले आन्दोलनलाई थप चर्कायो। त्रिविका नियुक्तिमा प्राज्ञिक ज्ञानभन्दा पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप नेविसंघले लगाउने गरेको छ।
उपकुलपतिले त्रिविमा नेकपाको भर्ती केन्द्र र ब्यारेक बनाए भन्दै नेविसंघले पटकपटक विज्ञप्ति र प्रदर्शन गरिरहेको छ।
नेविसंघले त्रिविमा भागबन्डा हुनु भएन, लकडाउनले स्थगित भएका परीक्षा तथा पठनपाठनबारे त्रिविले ठोस योजना बनाएन र यस्ता माग राखेका नेविसंघ कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाएर दु:ख दिने काम गरेपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको नेविसंघ त्रिवि समिति सचिव योगेन्द्र रावलले बताए।
रावललगायतलाई उच्च अदालत पाटनमा महेश्वरमान श्रेष्ठ र गणेशलाल श्रेष्ठले साउन १६ गते मुद्दा दिएका थिए।
त्रिवि कार्यकारी परिषद, उपकुलपति कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष कार्यालय, रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपाल, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ नेपालका महासचिव राजेन्द्र गौतम, नेविसंघ त्रिवि सचिव योगेन्द्र रावल, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ अध्यक्ष उदयकिशोर तिवारी, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ उपाध्यक्ष गीता श्रेष्ठलाई उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्रिविले नै मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप नेविसंघको छ। यसबीचमा नेविसंघले आफ्ना माग सुनुवाइ गर्न २१ दिनसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष कार्यालयमा ताला लगाएका थिए। पाटनले दिएको आदेशअनुसार ताला खुल्यो।
आफूहरूले उठाएका मागमा त्रिविले वार्ता गर्न नचाहेको आरोप नेविसंघको छ। नेविसंघले उग्र रूपमा प्रदर्शन गर्दै उपकुलपतिको कुर्सी, कार्यालयका गाडी र झ्याल, ढोकाका सीसा फुटाइदिएका थिए। गत साउन २७ गते भएको तोडफोडमा संलग्न सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी एक साता थुनेर छाडिदियो।
आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गर्न त्रिविमा प्रहरी तैनाथ गरेको र माग सुनुवाइ गर्न वार्तासमेत नगरेको विरोधमा हिजोआज नेविसंघले त्रिवि उपकुलपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन र टायर बालेर विरोध गरिरहेको छ।
सचिव रावलका अनुसार एक सातादेखि त्रिवि पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न अवरोध गरिएको छ। त्रिवि परिसरभित्र पदाधिकारीलाई प्रवेश गर्न नदिइएको दाबी रावलले गरे।
त्रिवि पदाधिकारी कार्यालय आउँछन् कि भनेर नेविसंघ कार्यकर्ता दिनहुँ त्रिवि परिसर पुग्छन्। उपकुलपतिविरूद्ध नारा लगाउँछन्। मंगलबार पनि टायर बालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका रावलसहित नेविसंघ कार्यकर्तालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले पक्राउ गरेको छ।
‘उपकुलपतिलगायतले गरेका कु-कर्मको भण्डाफोर गर्छौ,’ रावल भन्छन्, ‘छ महिनादेखि रोकिएका परीक्षा र पठनपाठन सुचारू गर्नेबारे केही योजना ल्याएका छैनन्। असक्षम पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ।’
नेविसंघले अब एक सातामा आफूहरूका माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
‘त्रिविमा कि वाम कि दाम भए मात्रै नियुक्ति दिइएको छ,’ रावलको आरोप छ, ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती गरेर त्रिविलाई ब्यारेक बनाउन खोजेका छन् यो स्वीकार्य छैन।’
वार्ताका लागि त्रिवि उदासिन भएकोले पनि आन्दोलन गरिरहनुपरेको उनले बताए।
‘पदाधिकारीले विश्वविद्यालयका ऐन र नियम मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पार्टी नेकपा होस् या कांग्रेस। कसैको नाममा उनीहरूले भनेजस्तो गर्न त्रिविमा पदाधिकारीलाई छुट छैन।’
नेविसंघले हालका पदाधिकारी विश्वविद्यालय आएको वर्ष दिन हुन लाग्दा शैक्षिक, प्राज्ञिक र भौतिक सुधारका काम नभएको बताएको छ।
नियुक्ति भएदेखि नै प्राज्ञिक मर्यादा र क्षमताका आधारमा भन्दा नेकपा कार्यकर्ता नियुक्त गरी त्रिविलाई दलीयकरणको पराकाष्ठमा पुर्‍याएको नेविसंघको आरोप छ।
‘विभिन्न नियकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा त्रिविको नियम लत्याएर मनपरी ढंगले कार्यकर्ता भर्ती गरी ऐन तथा नियमको खिल्ली उडाएका छन्,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षका नाममा विश्व बैंकबाट ऋण लिए पनि विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिर्नुपरेकै छ। अहिले फेरि ऋण लिन खोज्दैछन्।’
यतिमात्र होइन शैक्षिक विषयबस्तु पनि सम्बोधन नगरेको उनले बताए।
‘कोरोना महामारीको समयमा विश्वविद्यालयजस्तो संस्था ६ महिनासम्म कक्षा सञ्चालन, परीक्षा व्यवस्थापनलगायतका नीति र कार्यक्रम तय गर्न असक्षम र असफल देखिएको छ,’ रावलले भने।
विद्यार्थीहरुको पठनपाठन, परीक्षालगायतका विषयमा विद्यार्थीको हकहितमा विभिन्न मुद्दा उठाएका विद्यार्थीहरुलाई झुट्ठा आरोप लगाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने काम भएको पनि उनले बताए।
नेविसंघका यी मागबारे वार्ताबाटै समाधान गर्न लागिएको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालले जानकारी दिए।
‘विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा हुनुपर्‍यो। व्यवस्थित हुनुपर्‍यो भनिरहेका छन्। हाम्रो कोसिस जारी छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीका अरू माग उनीहरूलाई नै सोध्नु मलाई थाहा भएन।’
दलीय भागबन्डा नमिलेर आन्दोलन भइरहेका हुन् त? भन्ने प्रश्नमा शिक्षाध्यक्ष भुसालले भने, ‘भागबन्डा विद्यार्थीले माग्ने हो र? उहाँहरूले पेश गरेका एजेन्डामा हामी वार्तामै छौं।’
शिक्षाध्यक्ष भुसालले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै नेविसंघलगायतको आन्दोलनले त्रिविका कामकारवाहीमा असर पर्न गएको उल्लेख गरेका छन्।
वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका उनले नेविसंघले राखेका माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय प्रतिवद्ध रहेको हुँदा आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन नेविसंघलाई आग्रह गरेका हुन्।